ह्यारी होल जो Nesbø बाट क्यारिज्म्याटिक पुलिस अधिकारी संग २० बर्ष। विशेष | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, हाम्रो बारेमा, कालो उपन्यास
ह्यारी प्वाल उ फिर्ता आयो। उनका हजारौं अनुयायीहरू आज पनी मार्च २ 23 मा सडकमा पुगेका छन् तिर्खा. यो प्रकाशित छ la जो Nesbø द्वारा श्रृंखला मा एघारौं उपन्यास उनको सबैभन्दा प्रशंसित चरित्रको बारेमा र सबैभन्दा खास र क्यारिज्म्याटिक मध्ये एक विधा को। जो हुकिएको हुन्छ त्यसले मूर्ति बनाउँछ र जसले पनि गर्दैन, तपाईंलाई थाहा छ, स्वादका लागि, रंगहरू। म आफूलाई अनन्त महिमाको लागि ह्यारी होल गिल्डको ठूलो बहिनी सम्झन्छु, त्यसैले यो सबै भनिन्छ।
यो वर्ष पनि यो २० हो उनको प्रकाशन पछि पहिलो उपन्यास तपाईंको मूल देश मा, चमेरो। यहाँ उनी तेस्रो उपाधि लिएर आए रोबिन। र हामीलाई त्यो याद छ अक्टोबर हामीसँग छ फिल्म अनुकूलन de हिममानव, स्वीडन टमास अल्फ्रेडसन र माइकल फासबेंडरको साथ नायकको रूपमा। त्यसैले यो जान्छ यो विशेष. होलका प्रशंसकहरू र, निस्सन्देह, जो नेस्बे, यो शनिबार २ 25 हुनेछ बार्सिलोना मा उनको प्रस्तुतीकरण भ्रमणमा।
सबै भन्दा पहिले कि भन्न मैले सबै पढेको छु हेरी होल श्रृंखला को अतिरिक्त Nesb to द्वारा। स्पेनिशमा के प्रकाशित हुन्छ -डॉक्टर प्रोक्टर श्रृंखला y हेडहन्टर- र के अझै हराइरहेको छ, कि म अंग्रेजीमा प्राप्त गर्न सक्षम भएको छु -छोरा, हिउँमा रगत y मध्यरातको सुर्य-। र म ती सबै मन पराउँछु। आशा छ कि ती शीर्षकहरू चाँडै जारी हुनेछन्।
1 जो नेस्बे
2 ह्यारी होल जन्म भएको छ
3 ह्यारी होल श्रृंखला
4 एकल स्पर्श
5 ह्यारी र अरू सबै
5.1 सामान्य वर्णहरू
6 र जब यो सकियो
7 त्यसैले ...
7.1 थप जानकारी:
जो नेस्बे (ओस्लो, १ 1960 .०) एक दुबला र wire नार्वेजियन लेखक हो। मार्चको आधा पचास, छ दिन मा यो 57 हुनेछ। उहाँसँग स्पष्ट, चिसो र शान्त आँखाहरू, र एक गोरा र scrawny बिरालो को त्रिकोणीय अनुहार छ जो उचाइको डरलाई जित्न ढु .्गा चढ्न मन पराउँछ। जे भए पनि, आवाज नलगाउने इशारा, यदि म अहिले बसिरहेको छु भने। तर ऊसँग साइकोपेथको अनुहार पनि छ, एक अहानिकारक दलाल जसले एक आत्माविहीन राक्षसलाई डायबोलिकल दिमागमा लुकाउँछ र सबैभन्दा ठूलो अत्याचारको निर्माता।
हामी सबै क्रूरताको कल्पना गर्न सक्छौं कुनै समय किनभने क्रूरता र दुष्कर्म हामी तिनीहरूलाई मानकको रूपमा लिन्छौं। हामी तिनीहरू मध्ये जो क्राइम उपन्यास पढ्छन र मन पराउछौं यसले यसलाई अप्रत्याशित डिग्रीहरुमा थाहा छ, यद्यपि वास्तविकता सँधै काल्पनिकता भन्दा बढी छ। तर यो व्यक्ति कल्पना र तिनीहरूलाई एक असफल कला र प्रभुत्वको साथ लेख्छ। र म सानो भएकोले। स्कूलमा उनीहरूले फिल्ड ट्रिप जस्ता विषयहरूमा निबन्ध लेख्नुपर्‍यो। खैर, उहाँमा कोही पनि जीवित फर्केन, जसका कारण शिक्षकहरू उहाँसँग अलिकता पनि निराश भए।
अर्को शब्दमा, केटाले पहिले नै धेरै अँध्यारो तरिकतहरू औंल्याएको थियो, तर त्यसपछि उसले त्यो अधिक फाल्नेछ फुटबल। घुँडामा अस्थिबंधनमा अकाल चोट लाग्यो नर्वे दन्त्यकथाबाट वञ्चित गरियो जुन उनीहरूको सबैभन्दा प्रसिद्ध स्ट्राइकर हुने थियो। घृणाबाट उसले केही वर्ष बितायो सेना र त्यसपछि, स्मार्ट जस्तै उनी पनि संख्यामा थिए, उनले अध्ययन गरे व्यवसाय प्रशासन र अर्थशास्त्र अधिक काममा हिड्दै गर्दा।
को शार्क समाप्त भयो बोल्सा। एकै पटकमा, उनले गितार बजाए र गीतहरू रचना गरे उसको ब्यान्डको लागि, Derre भन्नुहोस्जुन उनले सहकर्मीहरू र एक सानो भाईसँग गठित गरे जसलाई ओडिनले केही वर्ष अघि भालालाई बोलाए। तिनीहरू कम खराब भए सम्म क्रोधित हुन खराब थिए, तिनीहरूले पिचमा हिर्काए र देशको चारै तिर यात्रा शुरू गरे।
तर एक दिन बच्चा, केहि केहि अब छैन, अफिसमा काम गरेर जलाइयो बिहान र ड्युटीमा जुवा डेनमा रात गाउन प्लेनहरू समात्नुहोस्। त्यसैले उसले भन्यो कि उसले विश्राम लिइरहेको छ। उहाँ जहाँसम्म उहाँ सक्नुहुन्थ्यो र, तर्कसंगत, त्यो हो एन्टिपोडहरू। यस अघि, एक प्रकाशक मित्रले उनलाई उनको ब्यान्डको ईतिहास र सफलताको बारेमा केहि लेख्न भन्नुभएको थियो। तर उनीसँग कुनै पनि लेख्ने कुनै योजना थिएन।
ह्यारी होल जन्म भएको छ
र मेरो लागि यो उहाँ भएको हुनुपर्छ जहाजको ढङ्ढङी वा उल्टो भयो किनकि यो क it्गारू भूमि नजिक आईपुगेको छ। त्यो, वा त्यो पर्याप्त भाग्यशाली थियो ईश्वरीय प्रेरणा को स्पर्श यो जीवनमा तपाईलाई एक पटक मात्र आउँदछ। त्यसोभए उसले कुञ्जीलाई हिर्काउन शुरू गर्‍यो र स्टाफलाई काल्पनिक भारमा पुर्‍याउने प्रारम्भिक प्रवृत्ति पुनः सुरु गर्‍यो।
नायकको रूपमा उनले एक काकाको आविष्कार गरे जसको सैद्धान्तिक रूपमा उनीसँग कुनै सरोकार थिएन र जो चरित्रको रूपमा खडा भयो जुन प्रत्येक लेखकले सिर्जना गर्ने सपना देख्दछ। र सुरुमा। यसले उनलाई बत्तीस बर्ष वर्ष र एक प्रभावशाली शरीर दियो viking प्रयोग गर्न: 194 सेन्टीमिटर अवश्य पनि अग्लो गोरा र हल्का आँखाहरु सँधै फ्लास्, ठूला कानहरु, कपाल कपाल र, सिद्धान्तमा, अप्रिय उपस्थिति। उनले उहाँलाई लापरवाहीको साथ लुगा लगाई काउबोई, Tshirts, ज्याकेट वा कोट र डा। मार्टेन बुट। र त्यो देखो र आकारको साथ तपाईं बरु फुटपाथ परिवर्तन गर्नेहरूको खराब पशुको कल्पना गर्नुहोस् यदि तपाईंले यसलाई पार गर्नुभयो भने।
तपाईंले दिनु भएको नाम, हैरी, उनले यसलाई उसबाट लिए मनपर्ने फुटबल खेलाडी र एपेलीडोको स्थानीय पुलिस प्रमुख उसको हजुरआमाको शहरबाट, जहाँ उहाँ गर्मीलाई बच्चाको रूपमा बिताउनुहुन्थ्यो।
त्यो ह्यारी होलमा उनले ए जीवनी जसमा परिवार छ उसको आमा हराइरहेको छ। उसको बुबा, Olavउसले आफ्नी पत्नीको गुमाउनुपर्दैन वा छोराको जटिल पेशालाई स्वीकार्दैन। र उनकी कान्छी बहिनी, Ssछ डाउन सिन्ड्रोम र यो उनीहरूको कमजोरी हो। उनले डराए पनि अँध्यारो पहिले नै लिफ्टहरू.
उनले एउटा शृंखला थप्यो महत्वपूर्ण हिट पचाउन गाह्रो छ र सरलता जति बुद्धिको साथ एक चरित्र। ह्यारी छ हठी, एक्लो, असामाजिक, विरोधाभास पूर्ण, जंगली र क्रूर कहिलेकाँही आफूलाई अरूसँग भन्दा बढी। तर पनि आरक्षण बिना वितरित तिनीहरूलाई र के उहाँ विश्वास गर्नुहुन्छ र एक बाट हो उदारता र एक रोमान्टिकवाद exacerbated र ravishing।
तर सबै भन्दा, नेस्बेले यो गरे अप्रत्याशित। र हेरी सम्पूर्ण श्रृ throughout्खलामा विकसित हुने तरिकाले तपाईंलाई प्राप्त गर्दछ। भूखंड, माध्यमिक, आदि तिनीहरू काम गर्छन् किनकि त्यहाँ उहाँ हुनुहुन्छ र एकै समयमा उनीहरूले पूरक छन्। निस्सन्देह, यदि यसले तपाईंलाई अook्कित गर्दैन भने, यसले लामो समय सम्म यसलाई प्राप्त गर्दैन तपाईंले जतिसुकै प्रयास गरे पनि। त्यो पनि हुन्छ। तर यदि उसले तपाईंलाई शिकार गरेको छ भने, उसले तपाईंलाई जान दिनेछैन, चाहे त्यो एक दिन आफ्नो मालिक बाबुको अनुग्रहले गायब भयो।
यस्तो व्यक्तित्व एक हुन जान्छ ओस्लो पुलिस निरीक्षक र निराशाजनक मादक। र कुनै पनि नागरिकता (काल्पनिक वा वास्तविक) घाइते वा बाहिर वा भित्र कमजोरीहरूको कानून प्रवर्तन अधिकारीहरूको लागि चिन्ता छ। त्यसैले उसले ह्यारी होल जस्तो नमूना पत्ता लगाए र आशाहीनक पनि छाडिदिए।
ह्यारी होल श्रृंखला
यो सबै Nesbø संग संग पहिलो उपन्यास त्यो विशेष देशमा ह्यारी होलको हो अष्ट्रेलिया, पहिलो चरित्र कि उनको चरित्र पनि यो जस्तो हुन गइरहेको छ। यो उनले एक धारावाहिक हत्याराको पछि लाग्ने सेट गर्‍यो, दुःखको कुरा भएजस्तै उहाँसँग यति गहिरो प्रेम भयो, र उसलाई ती केही हिटहरू गणना गर्न बाध्य पार्‍यो। यसै समयमा यसले उसलाई रक्सीको त्यो नरकमा पार्यो जसमा यसले उसलाई आउँछ र जान लगाउँछ, जब ऊ चाहान्छ, अरु नौ वटा किताबहरूको लागि। त्यो लेख्ने पहिलो एक्लो यसले पाँच हप्ता लियो र यो शीर्षक चमेरो.
1. चमेरो - 2। Cockroaches - 3। रोबिन
मुख्य कुरा के हो भने, मेरो लागि, ह्यारी होल एक चरित्र हो जसले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्थापन गर्दछ जटिल र अस्पष्ट मानव प्रकृति पूर्णताको साथ सीमामा सीमा। म यो पनि परिभाषित गर्छु अपूर्णताको पूर्णता र, यसका साथै Magia के प्राप्त गर्न यदि होल वास्तविक थियो भने, तपाईं यसलाई पार गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईं पछाडि जानुहुन्छ र आफैंलाई आफूलाई अयोग्य बनाउनु हुन्छ के तेस्रो हो। र के गरिनेछ केको लागि बनेको छ (सबैजनाले आफूले चाहेको कुरा बुझ्छन्)। त्यो भनिन्छ करिश्मा.
त्यो, वा उसलाई घरमा लैजानुहोस् र उनलाई अपनाउनुहोस् र चिप गर्नुहोस्: यो कुकुर मेरो हो। अब म उसको बुबालाई यति धेरै कुरा गर्ने अनुमति दिदैन् दुर्भाग्य, दुर्घटना र यातना। त्यो गरीब ह्यारी सबै चीजमा हुन्छ। पिटाइ, डुब्ने, हिमस्खलन जो उनलाई जिउँदो दफन, विकृति, रूप परिवर्तन, कुल हिच जिम बीम, अफिम र कडा ड्रग्स को सामयिक शट गर्न, लगभग वध र शटहरू।
त्यो उल्लेख गर्नु हुँदैन मजा लिनुहोस् / प्रेम / हृदय विदारक भोग्नुहोस् यो चमत्कारले उहाँलाई बौलाहा बनाउँदैन (उसलाई होइन, तर तपाईं गर्नुहुन्छ)। अर्को शब्दमा, कम्तिमा कुरा यो हो कि उसले पिउँछ। धेरै whiplash सहि गर्न थोरै वाइस छ, हेरी यद्यपि राम्रो भन्दा खराब मा जानुहोस्, सधैं उसलाई एक हात दिनुहोस् कि ऊ कहिल्यै व्याख्या गर्दैन वा विश्वास गर्दछ ऊ उदार छ र ... सबैजनाले चाहानुहुन्छ भने पनि, पहिलो, यसको पाठकहरू।
तथ्य यो हो कि जोसँग यो फेला परेको छ उनीहरूसँगै भाग्यशाली छ चमेरो। म तपाइँ सिफारिश गर्नुहुन्छ कि तपाइँ शीर्षकहरूको क्रम अनुसरण गर्नुहोस्. तपाईंको पठन श्रृंखला र पात्रहरू जस्तै विकसित हुनेछ, र तिनीहरूले अधिक रमाईलो गर्नेछन्। तर बाँकी हामी तेस्रो कथामा भेटे, रोबिन, जहाँ पात्रहरू देखा पर्दछ जुन श्रृंखलामा सामान्य हुन्छ (श्री नेस्बेले नभए सम्म)।
सुरु गर्नुहोस् रोबिन त्यहाँ छ विशेष स्पर्श। हामी यसलाई एक कारमा निगरानीको पहिलो र अराजक दृश्यबाट देख्छौं जहाँ दुईजना पुलिस साथीहरू छन्। एक महिला र एक मानिस जसलाई उनीले आफ्नो निरन्तर प्रत्याशा र के हुन्छ भन्ने अन्तर्ज्ञान द्वारा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ, र उनको अप्रत्याशितता उहाँलाई के गर्न को लागी जे हुन्छ।
त्यसो भए उनीहरु पनि हुन सक्छन् संवादहरु, केही एक संग धेरै विशेष हास्य त्यो शृंखलाभरि अवस्थित छ। वा यो हुन सक्छ अस्थिरता तर आत्म-आश्वासन हेरी, उनको क्षमता उसले समस्या वा केस आफ्नै तरिकाले समाधान गर्ने छ कि भनेर। वा हुनसक्छ यो मात्र हो वाक्यांश वा ती इशाराहरू मध्ये एक, मैले भने जस्तै। तर तपाइँलाई के थाहा छ भावना पढ्ने र कल्पना गर्ने हो नयाँ। हेरीले तपाईंलाई पहिल्यै चिनेका धेरै पुलिसहरूमा सुविधाहरू साझेदारी गर्न सक्दछ। तर ऊ फरक छ। योसँग अनौंठो कुरा छ जुन मलाई लाग्दैन राम्रोसँग परिभाषित गर्न सकिन्छ। वा हुनसक्छ यो केहि होइन, तर सबै।
यो अपराध उपन्यास जस्तै विधामा उत्कृष्ट हुन धेरै गाह्रो छ। त्यहाँ धेरै स्टिरियोटाइप छ, यति धेरै सडकहरू पहिल्यै यात्रा गरिसकेका छन्, यति धेरै ठूला प्रमुख पुलिस अधिकारीहरू ... तर जब म समाप्त गर्छु रोबिन, मैले ह्यारी होलले जलाएको थियो म धेरै धेरै विरलै खान्छु। सावधान रहनुहोस्, उहाँसँग, निर्माणको बाटोमा त्यो सफलताको साथ। कथानक अझै पनि क्लासिक छ, अधिक वा कम पहिले नै धेरै अन्यमा पढिएको छ, तर ऊ यो एकदम नयाँ छ.
4. नेमेसिस - 5। शैतानको तारा - 6। उद्धारक
त्यसोभए तपाईंले श्रृंखला प्राप्त गर्नुभयो र यसलाई पढ्नु भन्दा बढि निल्नुहोस्। तपाईले हेरीलाई बढी चिन्नुहुन्छ। तपाईं उहाँसँग बृद्धि हुनुभयो उसको उमेरको तेर्सौंदेखि शुरुका चालीसौंसम्म, जुन उसले पहिले नै व्यतीत गर्यो पुलिस। ल, उसलाई र अन्य सबै उत्कृष्ट माध्यमिक त्यो यसको वरिपरि छ। तर बाट उद्धारक, तपाइँ सोच्न थाल्नुहुन्छ कि अर्को पुस्तक राम्रो छ।
जब समाप्त हुन्छ चितुवा, जसको पृष्ठहरू तपाईं लगभग shakily बदलिएको छ पहिले नै, तपाईं यति जोडिएको छ कि तपाईं स्वर्ग र पृथ्वी हलचल कि ब्याट खोज्न, Cockroaches, भूत y पुलिस Henफिर अझै स्पेनिशमा प्रकाशित भएको छैन। मैले तिनीहरूलाई फेला पारें र तिनीहरूलाई अंग्रेजीमा पढें, तर मैले यो नर्वेली भाषामा पनि गर्न सक्थें र एउटा अनुवादक अनुवादकको साथ। पुलिस तपाइँलाई समाप्त गर्नुहोस्। र धेरै दिन पछि तपाईंको शरीरमा भावनाको साथ, तपाईं यो निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ कि केवल पाँच महिनामा तपाईं आफैले पढ्नुभयो सबै समयको सर्वश्रेष्ठ कालो श्रृंखला को एक.
ह्यारी र अरू सबै
यो केवल मुख्य पात्रको कारणले होइन, तर को कारणले हो कथा र प्लट गुणस्तरमा प्रगति। कसरी तपाईं पॉलिसिंग हेर्नुहोस् शैली र प्रविधि। अवश्य पनि, तपाईं हेरफेर गरिएको छ श्री नेस्बेको को आवाजमा, तर तपाईले उस्तै उस्तै गर्नुहुन्न। यो तपाईको चाहाना हो: तपाईले १ 180० डिग्री पालो पाउनु भयो जुन तपाईले महसुस गर्नुहुन्थ्यो तर लाग्दैन कि सम्भव छ। वा हो, तर तपाईं यो भन्दा बढि विश्वास गर्न चाहनुहुन्न ह्यारीले तपाईलाई देखाउँदछ कि ऊ सय चोटि उही गल्तीहरू र भयrors्कराहरूमा पर्दछ, जुन उत्तम र सबैभन्दा खराबमा सक्षम छ।
यसले तपाईंलाई निराश तुल्याउँछ, यसले तपाईंलाई दु: खी तुल्याउँछ, यसको कमजोरीले तपाईंलाई रिस उठाउँछ, कसरी यो अकल्पनीय रूपमा ठोकर खान्छ जब यसमा सबै कुरा छ, बौद्धिकता, सामर्थ्य, अन्तर्ज्ञान, लगनशीलता… तर यो फरक पर्दैन। आकर्षण र मोहको लागि उसको क्षमता तपाईं उसलाई पतन र पनि उहाँ संग उठ्नुहुन्छ, सबैभन्दा खराब माफ गर्नुहोस्, ती सबै वार साझा। केहि ईन्थोलजिकल अन्तको रूपमा वास्तवमै अप्रत्याशित छन् उद्धारक वा, मेरो विचारमा, सम्पूर्ण श्रृंखलाहरूमा सब भन्दा डरलाग्दो हो पुलिस। र पक्कै पनि सबै पुस्तकहरूमा डरलाग्दो र स्तब्ध पार्ने दृश्यहरूको अभाव छैन।
थप रूपमा, तपाईंलाई चेतावनी पनि दिइन्छ। तपाईले यसलाई आउँदै गरेको देख्नु भएको छ तिमीले उसलाई समात्यौ truco Nesbø लाई। तर होइन, तपाईं जिद्दी गर्नुहुन्छ कि यो हुने छैन, कि होईन, कि त्यसो हुँदैन ... तर यो हुन्छ। र तपाइँ पढ्न जारी राख्न चाहनुहुन्न। तपाईंले यसलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईंलाई लाग्छ कि यो वास्तवमै भयो। (मलाई कम्तिमा थाहा छैन) कन्सोलिसन कि यो हो पुलिस उज्जवलसँग सबैभन्दा धेरै प्रेम र खुशीको ह्यारीमा उसले केक पनि लिन्छ।
तपाईंले कहिले यस्तो पढ्नु भएको छैन, लगभग यससँग सुरु देखि भोली, सधैं असुरक्षा संग तर, एक परिवर्तन को लागी, एक आशावादी संग कि अपूर्व अनुभव गर्दछ, यद्यपि यसले तपाईलाई अधिक डराउँछ। यो निश्चित रूपले खराबमा गइरहेको छ। त्यसोभए तपाईं अन्त्यमा पुग्नुहुनेछ र ... ओह, त्यो अन्त्य ... जे भए पनि, तीव्र पछि यति धेरै नराम्रो पेय पछाडि पनि अविश्वसनीय हिममानव, चितुवा y भूत। विशेष रूपमा भूत तपाईंले उसलाई सबैभन्दा कालो, सबैभन्दा खतरनाक र नियन्त्रण बाहिरको हेरी देख्नुभयो।
7. हिममानव - 8। चितुवा - 9। भूत
जे भए पनि, के तपाईलाई समानुभूति सबै संग। ह्यारीसँग र माध्यमिकको सहरको साथ, राम्रोसँग सबैभन्दा खराब खराबहरू सम्म।
मालिकहरु छन् Bjørn Møller and Gunnar Hagen। साथीहरू मन पराउँछन् एलेन, ज्याक हलोभर्सेन, बिजान होल्म वा तुरुन्त प्रिय बीट ल्यान, मनोचिकित्सक Ståle aune, साथीहरू पागल ट्याक्सी चालक जस्तो आइसिन र को geek ट्रेस्को, अस्थिर तर प्रतिभाशाली क्याट्रिन ब्राटवा काजा समाधान, मा आशा को किरण चितुवा.
त्यहाँ पनि ती रिसाइन्डहरू छन् जस्तै परिष्कृत हरामी टम वालर र सुरुचिपूर्ण र डरलाग्दो मिकाएल बेलम्यान त्यो चूहासँग जुन उसको एकोलेट छ ट्रल्स बर्न्टसेन। र हत्यारे सब भन्दा राक्षसी, the असम्भव अवस्था, the सबै भन्दा डरलाग्दो अपराध वा सबैभन्दा प्रभावशाली मञ्च। तपाईं तिनीहरूलाई सबै मनपराउनुहुन्छ र तपाईं यसलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्न
र को रूपमा: राकेल फाउके र उनको छोरो ओलेग, वा बढी वास्तविक प्रेम, उतार-चढाव, असफलता र विपत्तिहरूले भरिएको, तर असीम र गहिरो। हो तर कुनै स्थिर र लत छैन, विनाशकारी र उहि समयमा गौरवशाली।
र जब यो सकियो
त्यसोभए जब मैले समाप्त गरेँ, पहिले म खाली थिएँ, त्यसपछि मैले हेरीलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि वेदनाको गांठ महसुस गरें। म मेरो जिम बीमको बाहिर भागेको थिएँ र महाकाव्य अनुपातको ह्यान्गओभरको लागि कुर्दै थिए, यो थियो रूपमा। अन्तीममा, मैले तपाइँलाई Nesbø को हथौडा प्रहार गर्न आग्रह गरे। "उसको टाउको चकनाचूर पार्नुहोस्!" मैले आफुलाई मेरो सबैभन्दा धेरै प्वाल पारेको भने। त्यसैले सबै चीज रहन्छ यो छ, PERFECT।
तर होइन, एक धेरै दिक्क लाग्ने ढोका खुला छोडिएको छ। हो, त्यहाँ अधिक Harry छन्। अब भित्र तिर्खा। र प्रश्नहरू फर्किन्छन्, उसको भविष्यको बारेमा अनिश्चितता। थप केबल। यो समय यो कसरी रहनेछ? यो अन्तिम, अन्तिम हुनेछ? के श्री नेस्बेले आफ्नो मुर्ख सबै सुनका अण्डाहरूलाई हटाउन सक्षम हुनेछन्? पक्का छैन, वा हो? जे भए पनि। तपाईं लगभग यसलाई कल्पना गर्न चाहनुहुन्न, तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले त्यसलाई विरोध गर्नुहुन्न। अब उप्रान्त छैन।
तर हो, हामी यसको प्रतिरोध गर्छौं र हामी यो नयाँ कथा पढ्ने आशा गरिरहेका छौं पिशाच विषयवस्तु। फेरि धेरै रगतको साथ, प्लट ट्विस्ट र क्षणहरू जुन उनीहरू जस्तो देखिदैनन्, त्यसैले नेस्बे। हामी फेरि भेट्छौं सामान्य वर्णहरू र त्यहाँ केहि छ नयाँ। समीक्षा छिट्टै हुनेछ, किनकि त्यहाँ पहिले नै २ 23 पृष्ठहरू छन् र चीजहरूले धेरै दिन्छन। त्यसोभए मेरो हातमा केहि छैन।
... कसैलाई साथ दिनुहोस् - यदि यो काल्पनिक छ- यसले तपाईलाई धेरै सत्यताको साथ महसुस गराउँछ, निराशा, डर, दु: ख, षड्यन्त्र, आश्चर्य, त्रास, त्याग, नियन्त्रण को अभाव, मित्रता र गहनता संग प्रेम कि मतलब ह्यारी होल एक हो कमै मात्र प्राप्त हुन्छ कि खुशी.
त्यो यति नक्कल गर्नको लागि कि तपाईं उहाँसँग नरकमा जानुहुन्छ ग्रेट्सको योग्यता हो। श्री श्री नेस्बे हुनुहुन्छ। सबैभन्दा ठूलो। असीम कृतज्ञ हामीलाई धेरै आनन्द उठाउनको लागि।
JO NESBØ वेबसाइट (अंग्रेजीमा)
JO NESBØ। YouTube मा साक्षात्कार को चयन
फेसबुकमा: जो Nesbø मा लगाइएको।
नेसुबाको बारेमा यहाँ एक्चुलिडाड लिटरेटुरामा अधिक: ह्यारी होल २०१ 2017 मा फर्कन्छ.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » ह्यारी होल जो Nesbø बाट क्यारिज्म्याटिक पुलिस अधिकारी संग २० बर्ष। विशेष
ह्यारी होल भाईचारे को पाठक को लागी, यो लेख अद्भुत छ, पहिलो यो जुन यो लेखिएको छ उत्कटता, प्रशंसा र सच्चाई को कारण, र दोस्रो किनभने म पूरै पहिचान महसुस गर्छु। श्री नेस्बो धेरै पहिले मलाई ह्यारीसँग विचलित भए, अन्तिम हजार रोमान्टिक मध्ये एक। धेरै धेरै मारियोला धन्यबाद।
नुरिलाउलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईलाई के म भन्न चाहन्छु कि तपाईलाई पहिल्यै थाहा छैन? तपाईंको टिप्पणीको लागि धन्यबाद।